XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Puntland ay ka laabtay kiiskii loo haystay Xildhibaan Cawil Xasan Daad? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Puntland ay ka laabtay kiiskii loo...
XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Puntland ay ka laabtay kiiskii loo haystay Xildhibaan Cawil Xasan Daad?
Qardho (Halqaran.com) – In ka badan 20 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa kulan kula qaatay Degmada Qardho Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Xildhibaanadan ayaa maanta ka soo ambabaxay Magaalada Garoowe, waxayna Madaxweynaha u sheegeen in ay u wadaan dhambaal raaligelin ah oo ku saabsan arrinta Xildhibaan Cawil Xasan Daad.
Mudaneyaasha Baarlamaanka Puntland ka tirsan waxay Madaxweynaha u cadeeyeen in hab dhaqankii ka dhacay Furitaankii Kalfadhiga 45-aad ee Baarlamaanka Puntland ay ahayd wax aan u khalmin Dowladnimada Puntland ee 21-ka jirsatay.
Xildhibaanada ayaa Madaxweynaha ka codsaday in la cafiyo Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo ay Xeer illaalintuna ka laalabato dacwadda ay ka gudbisay Xildhibaanka.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo si qoto dheer u dhageystay Mudaneyaasha Baarlamaanka ee Qardho ugu yimi arrintan darteed ayaa waxa uu ka aqbalay codsiga ay u soo jeediyeen.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad?
Puntland oo 15 maxaabiis ah ku wareejisay dowladda Soomaaliya
axmed November 2, 2019 At 17:35
Wax kasta Puntland wey ka heshiin kartaa, dadku waa in ay is fahmaan, waayo cadow badan ayaan leenahay, umana ogolin in ay ku farxaan is qabashadayada. ha ooyaan markaas.